London”Dad Muslim Ah Oo Kasoo Baxay Masjid Ay Salaad Ku Tukanayeen Oo Weerar Gaadhi Loo Adeegsaday Lala Beegsaday Iyo Khasaaraha Ka Dhashay | Berberatoday.com
London”Dad Muslim Ah Oo Kasoo Baxay Masjid Ay Salaad Ku Tukanayeen Oo Weerar Gaadhi Loo Adeegsaday Lala Beegsaday Iyo Khasaaraha Ka Dhashay
London(Berberatoday.com)-Weerarkii London, Aljazeera waxay sheegtay in 4qof ku dhinteen tiro kalena ku dhaawacmeen, dadka wax gaadheen waxaa u badan Soomaali, ninka weerarka fuliyey oo midabkiisu cadaan yahay wuxuu gaadhi Jiidhsiiyay dad salaad kasoo baxay, meel u dhow masaajidka Finsbury Park ee ku yaal waqooyiga London.
Muuqaal ay isoo direen Soomaalida meesha joogta, oo aan ku habooneyn inaan baahiyo, waxaa ka muuqda dad Soomaali ah oo Ashahadaanaya oo ku xoonsan dadka wax gaareen, nin oday ah ayaa madaxa la haya, nin kalena waxaa laga guraya naqaska, meel waxa jiifta qof dumar ah oo aan dhaq dhaqaaqeyn, meelkalena waxa iiga muuqda nin cadaan ah oo madaxa go’ay.
Haween qaybtood indhashareer xiranyihin iyo wiilal dhalinyaro u badan oo Soomaali ah ayaa dadka caawinaya, waxay kala garan la’yihiin dadka wax gaareen, badi way qaylinayaan, Booliiskuna hareeraha ayuu ka joogaa.
Hooyo Soomaaliyeed oo isoo wacday markii aan daabacay qoraalkii ugu horeeyay ee weerarka, waxay ii sheegtay in ay masaajidka agtiisa degantahay, waxay ii sheegtay in dadkii lagu celiyey masaajidka markii shilku dhacay, wadooyinkana la xiray, intaasi waxay iigu dartay in ciyaalkeedii aysan war u hayn oo ay masaajidka ku maqanyihiin, waxaan u rajeeyay in ay hesho caruurteeda.
Wixii kasoo kordha khasaaraha ka dashay weerarka iyo wararka la xiriira qoraalada danbe ayaa kula socon doontaan.